Xukuumadda Oo Ansixisay Hindise Sharciyeedka Maamulka Dakhliga+(SAWIRRO) – War La Helaa Talo La Helaa
Xukuumadda Oo Ansixisay Hindise Sharciyeedka Maamulka Dakhliga+(SAWIRRO)
By Xuseen Madoobe	 Last updated Dec 30, 2018
Golaha wasiirrada xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) oo maanta yeeshay kulankoodii ugu dambeeyay sannadka 2018, ayaa ansixiyay hindise sharciyeedka maamulka dakhliga oo ay golaha usoo gudbisay wasaaradda maaliyadda dalka.
Kulanka golaha oo uu guddoomiyay ra’iisul wasaarha Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa intiisa badan diiradda lagu saaray isla xisaabtanka iyo qiimaaynta waxyabahii sannadka dhammaadka ah u qabsoomay afarta tubood ee ay ku salaysantahay shaqo maalmeedka dowladda Soomaaliya.
“Waxa aan maanta fursad u helaynaa in aan is qiimayno xukuumad ahaan ka wasaarad ahaan iyo ka xafiis ahaan. Isla xisaabtankaan waxa uu naga caawi doonaa in wixii naga hallaabay aan hagaajinno sannadka soo socda”, ayuu yiri ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre..
Barnaamijka xukuumadda ee horraantii 2017 ay ansixiyeen golaha shacabka ayaa loo qaybiyay afar tubood oo kala ah siyaasadda loo dhanyahay, arrimaha bulshada, horumarinta dhaqalaha iyo amniga iyo cadaalladda kuwaas oo yeesha shirar joogta ah oo ku salaysan isla xisaabtan ku dhisan hufnaan iyo daah-furnaan.
Xildhibaan Golaha shacabka ka tirsanaa oo si lama filaan ugu geeriyooday Muqdisho
Somalia says kills 30 al-Shabab militants